Japan Culture House
Japan Culture House ကို မရောက်ဖူးသေးသူတွေအတွက် နေရာလမ်းညွှန်လေး ပြောပြချင်ပါတယ်။
Japan Culture House က ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ပုလဲကွန်ဒိုမှာ တည်ရှိတာပါ။ တိုက်-စီ၊ ၂လွှာ၊ အခန်း-၃၂၂ဘီ ပါ။ ပုံကိုကြည့်လိုက်ရင် တိုက်-စီ ရှိတဲ့နေရာကို အနီရောင်လေးနဲ့ ပြပေးထားပါတယ်။ ဂျပန်စာလေ့လာနေသူများနဲ့ မစိမ်းတဲ့ MAJA ရုံးခန်းတည်ရှိတဲ့ တိုက်ပါ။ MAJA Centre နဲ့ အလွှာအတူတူပါပဲ။ ဒါဆိုရင် ရှာရလွယ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကားမှတ်တိုင်နဲ့လမ်းညွှန်ရမယ်ဆိုရင် ကုက္ကိုင်းမှတ်တိုင် နဲ့ ဟာမစ်တစ် မှတ်တိုင်ကြားလောက်မှာ ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းကသွားတဲ့ ဘတ်စ်ကားလိုင်းကို စီးလာရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ လိပ်စာကို သေချာသိသွားပြီဆိုတော့ ဆက်ဆက်လာလည်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်။
Japan Culture Houseへの行き方を紹介します。JCHはカバーエーパゴダ通りにあるパールコンドの中にあります。C棟の2階（日本の3階）322B号室です。地図の赤い場所がC棟です。日本語学習者の人にはおなじみのMAJA事務所のある建物でMAJA Centreと同じ階です。パールコンドはバス停でいうとコッカインとハーミッティッの間にあります。カバーエーパゴダ通りを往来するバスに乗ってください。みなさまのお越しをお待ちしています。
မြန်မာနိုင်ငံဂျပန်ပြန်ပညာသင်ဟောင်းအသင်း၏ Japan Culture House တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် Office Staff (ကျား/မ) တစ်ဦးအလိုရှိပါသည်။
• မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။
• တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ရသူဖြစ်ရမည်။
• Microsoft Office (Word, Excel) ကျွမ်းကျင်ရမည်။
• အင်္ဂလိပ်စာ ရေး၊ဖတ်၊ပြော ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။
CV အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာရေးသား၍ ရရှိထားသော မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ၊ Certificate မိတ္တူများနှင့်အတူ ၂၀၁၇ ဇူလိုင်လ (၂၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ MAJA ရုံးခန်းသို့ ရုံးချိန်အတွင်း ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Room(707)၊ (7)လွှာ၊ တိုက် (စီ) ၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊
ဖုန်း - 09 8612151 , 09 262602121
Japanese Igo Game
ဂျပန်ရိုးရာကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Igo ကို အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း နေ့လည် ၁နာရီ မှ ၃ နာရီအထိ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဥာဏ်ရည်သုံးပြီး ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ Igo ကစားနည်းဟာ အရှိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှ ပိုမို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပြီး တစ်ခါကစားဖူးရုံဖြင့် နောက်ထပ် ကစားချင်အောင် ဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့ ကစားနည်းတစ်ခုပါ။
Fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားတဲ့ ယောက်ျားလေးများအတွက် Men's NON-NO လို့ခေါ်တဲ့ magazine JCH မှာ ရောက်ရှိနေပါပြီ။ အေးအေးဆေးဆေး လာဖတ်ကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
July လ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း ဂျပန်ရိုးရာဂျင်ကစားနည်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ APCC မှကလေးငယ်များလည်း စိတ်ပါဝင်စားစွာ လာရောက်ကစားနေကြပါတယ်။ JCH မှာ ဒီနေ့ တစ်နေ့လုံး ဂျပန်ဂျင်အတူတူကစားကြည့်ရအောင်။
Japan Children’s Day
မေလ ၅ရက်နေ့မှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကလေးများနေ့ပွဲတော်ကို JCH မှာ ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျပန်သတင်းစာများနဲ့ Kabuto ခေါက်ပြီး ဆူရှီစားခဲ့ကြပါတယ်။ ကတ်ထူအပိုင်းအစလေးတွေကို ဆက်ပြီး Yoroi များကိုလည်း ဖန်တီးဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အားလုံးပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
JAPAN CULTURE HOUSE ပိတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ညနေ ၆နာရီ ကစပြီး ဂျပန်ရုပ်ရှင်ကို အတူတူကြည့်ကြရအောင်။ ဒီတစ်ကြိမ် ပြသမှာကတော့ '' စကားလုံးတွေရဲ့ ဥယျဉ် / Garden of Words '' ဆိုတဲ့ အန်နီမေးရှင်းရုပ်ရှင် ပဲဖြစ်ပြီး မနှစ်က ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ '' Kimi no na wa / your name. '' ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Mr. Makoto SHINKAI ရဲ့ လက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ '' Kimi no na wa / your name. '' မှာလိုမျိုးပဲ ခံစားမှုရသကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်း နဲ့ လှပတဲ့ပုံရိပ်တွေ၊ ဒါရိုက်တာ Mr. Makoto SHINKAI ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို မြင်တွေ့ခံစားကြည့်ရအောင်။
'' စကားလုံးတွေရဲ့ ဥယျာဉ် / Garden of Words ''
ပြသချိန် ၄၆မိနစ်
ဖိနပ်ချုပ်တဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသား တာကာအို က မိုးရွာတဲ့နေ့တွေဆိုရင် ပထမဆုံးအတန်းချိန်ကို မတက်ဘဲ ဥယျာဉ်ထဲမှာ ဖိနပ်ဒီဇိုင်းတွေကို စဉ်းစားလို့နေခဲ့တယ်။ တစ်နေ့တော့ ယူကီနို လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ တစ်နေရာရာမှာ မြင်ဖူးသလားလို့ မေးကြည့်လိုက်တော့ ယူကီနိုက ငြင်းလိုက်ပြီး Manyoshu ရဲ့ Tanka (ဂျပန်ကဗျာ) တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ " မိုးခြိမ်းသံသဲ့သဲ့ တိမ်တူတူမှာ မိုးရွာပေးနိုင်မလား ၊ အဲဒီလိုဆိုရင် မင်း ဒီနေရာမှာ ရှိနေမယ့်ဟာကို" လို့ဆိုပြပြီး ထွက်သွားခဲ့တယ်။
မိုးရွာတဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုရဲ့ တွေ့ဆုံမှုကစပြီး သူတို့နှစ်ယောက် စတင်ပတ်သက်ခဲ့ကြတယ်။ မိုးကာလလွန်မြောက်ပြီး ပွင့်လင်းရာသီရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ အချိန်အတော်အကြာ နှစ်ယောက်သား မတွေ့ဖြစ်ကြတော့ပါဘူး။ ဒုတိယနှစ်ဝက်ရဲ့ နွေရာသီတစ်ရက်မှာတော့ တာကာအိုဟာ ကျောင်းမှာ ယူကီနိုကို ဖြတ်သွားရင်း တွေ့လိုက်ပြီး ယူကီနိုဟာ ရှေးဂျပန်စာသင်တဲ့ ဆရာမဖြစ်နေမှန်း သိလိုက်ရပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ယူကီနိုဟာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ မနှစ်မြို့ခြင်းခံရပြီး အလုပ်ထွက်တော့မယ့်အကြောင်းပါ သိလိုက်ရပါတယ်။
ဥယျာဉ်ဘက်ကို ခြေလှမ်းတွေဦးတည်နေတဲ့ တာကာအိုတစ်ယောက် ယူကီိနိုနဲ့တွေပြီး " မိုးခြိမ်းသံသဲ့သဲ့ မိုးမရွာပေမယ့်လည်း ငါမင်းနဲ့အတူ ဒီနေရာမှာ ရှိနေမှာပါ ၊ မင်းသာနေခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် " ဆိုတဲ့ Manyoshu ရဲ့ Tanka ကို ပြန်ဆိုပြခဲ့ပါတယ်......။